Buka: Umama eshaya ingane eRestaurant | News24
Buka: Umama eshaya ingane eRestaurant
Johannesburg - Ithukuthelise abaningi ivideo esabalale ezinkundleni zokuxhumana, owesifazane eshaya ingane yakhe ekhubazekile endaweni yokudlela eseFourways enyakatho yeGoli ekuqaleni kwesonto.
Kubukwa ukuthi lo wesifazane ubehlezi endaweni evulelekile kule restaurant kanti ubecelele le ngane yakhe yomfana ipuleti le-pasta wase ezama ukuyifunza.
"Umfana ubengadli kahle, mhlawumbe ubengakufuni ukudla, lo wesifazane wacasuka washaya lo mfana ekhanda, emfunza ngenkani," kuzwakale omunye wabanikazi bendawo yokudlela uKyri Tjirkos esho.
Abantu abebeseduzane abebebukele okuqhubekayo bangenelela, betshela lo wesifazane ukuthi akufanele amshaye umfana.
"Indoda ebihlezi eceleni kwabo ikhulume nalo wesifazane, kanti ngicabanga ukuthi yila avele ahluleka khona ukuzilawula, waqhulula inhlamba, ingane wayishaya kakhulu kunakuqala, wawisa itafula kwaphihlika amapuleti.
"Ngiphume ngaleso sikhathi ngazama ukukhuluma nowesilisa ngoba bengicabanga ukuthi uyena owenza lo wesifazane acasuke kakhulu futhi bengingafuni ukuthi baze babambane ngezandla. Kube sekuqhamuka onogada benxanxathela yezitolo bathulisa umfana obekhala."
Lo wesifazane uxolisile kuTjirkos ngomonakalo awenzile wathi uzokhokha wabe eselandela onogada, abebethulisa ingane, kubika iFourways Review.